Mask Inodzivirira Gasket Vagadziri uye Vanotengesa - China Fekitori - Quanzhou waimaoniu Export uye Export Trade Co, Ltd.
Musha > Zvigadzirwa > Masks > Mask Inodzivirira Gasket
Iyo mask yekudzivirira gasket iri mukati memaski. Chinja gasket nguva imwe neimwe yaunoshandisa, uye iyo masiki inogona kushandiswa kakawanda.
Iyo Mask Yokudzivirira Gasket haisi kungoita nyore kutakura uye kushandisa, asi inongoda kuchinja gasket kamwe chete pazuva, inogona kuita mask inoshandiswa kwemazuva matatu, inogona kunyatsogadzirisa kushomeka kwemaski.
Mask Inodzivirira Gasket inogona kudzivirira kubva kuhutachiona?
1. Zvinotarisirwa, zvinoshanda uye zvinogona kuwedzera nguva yekushandiswa kwemask kune imwe nhanho. Rudzi urwu rwe gasket kana pad rakagadziriswa nekuchimbidzika nemamwe makambani mukupindura kushomeka kwemasiki padenda. Pane mapepa anonamira pamativi ese e gasket, ayo anogona kubatirirwa mukati me mask kana abvaruka kuti asatsvedza pakati pe mask kana gasket.
2. Kana uchishandisa mask inenge yakadaro gasket, mweya unoburitswa neiye akapfeka anotanga kupinda mukati megasket, uye chikamu chehunyoro chinenge chakabatwa kana kudhonzwa nejenasi, saka huwandu hwekunyorova hunowana pasi peefetera remask. kudzikiswa, uye nokudaro Izvi zvinodzora kuwanikwa kwemagetsi emagetsi mune yefaira rakakonzerwa nekunyorova.
3. Paunenge uchipfeka mask ine gasket inoraswa, nyatsoteerera kuomarara pakati pe mask kana kumeso, nekuti mamwe ma gaskets akanyanya kuwanda anokanganisa kuomarara.
Hot Tags: Mask Dziviriro Gasket, Vagadziri, Vanozvitengesa, Vakawandisa, Fekitori, Tenga, China, Yakagadzirwa muChina, Mutengo, Mutengo, Mutengo, Quotation, CE, FDA
Nzvimbo yeMask Inodzivirira GasketDisposable mask gasketMask gasketChiso Mask gasketMedical maski kuraswa gasketKurapa mask gasketVana maski gasketN95 maski gasket